တရုတ်ကို တစ်ရစ်ချင်း ချည်နေတဲ့ အမေရိကန် နဲ့ မဟာမိတ်တို့ရဲ့ကိုယ်စားပြု ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ အာဆီယံ ၅ နိုင်ငံခရီး – Let Pan Daily
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဆိုအာဘေးက စစ်စရိတ် ကြီးမြင့်မူအတွက် တရုတ်မှာတာဝန်ရှိတယ် လို့ဆိုလိုက်တာတရုတ်ဘာအသံမှထွက်မလာပါဘူး
သူဆိုလိုတာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ ဘင်္ဂလား က အမေရိကန် နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေတရုတ်ကို ပိတ်ဆို့ထားမူအတွက် တရုတ်ခံရမယ်လို့ ရန်စလိုက်တာပါဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလဲ အာဆီယံ ၅ နိုင်ငံခရီးထွက်နေပါတယ်
အဲ့ ငါးနိုင်ငံလုံးဟာ တရုတ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေ ဖြစ်နေပါတယ် မြန်မာကိုတော့ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ယန်းဘီလီယံ ၃၀ထောက်ပံမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးခရီးစဉ်မှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနဲ့လဲတွေ့မှာဖြစ်သလို ကာချုပ်နဲ့လဲတွေ့မှာပါ
အခုဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာ အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တို့ရဲ့ကိုယ် စားပြုလာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူလည်ကြီး အီရန်က ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေသလို
မြောက်ပုကလဲ အသံတောင်မထွက်တော့ပါဘူးထရန့်ကလဲ တရုတ်ကိုတစ်ရစ်ချင်း ချည်လာလိုက်တာအခုဆို တရုတ်မှာ ကုမ္မဏီပေါင်း ၂.၃၁သန်
း ပိတ်သိမ်းလိုက်ရသလို လူဦးရေသန်းနဲ့ချီ အလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်သွားပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတွေ ပိတ်ဆို့မူကြောင့်တရုတ်ကုမ္မဏီပိုင်ရှင်သူဌေးတွေ ပြိုကျကုန်တာကြောင့်ပါတီအတွင်းမှာလဲ ကျင်ဖင့်ကို ထောက်ခံမူတွေကျဆင်းလာပါတယ်
စစ်မတိုက်ဖြစ်လဲ တရုတ်အနေနဲ့ ကမ္ဘာကို ကိုဗစ်လျော်ကြေး ဒေါ်လာထရီယံနဲ့ချီပေးရပါမယ်တိုက်လို့ရူံးလဲ နိုင်ငံလဲကြေလျော်ကြေးလဲပေးရပါမယ်တရုတ်ဘယ်လိုမှရှောင်လွှဲမရပါဘူးသူမျှော်လင့်ထားတာ ရခိုင်က ဘင်္ဂလားထွက်ပေါက်အကြီးအကျယ်ခံစစ်ပြင်ချင်တာ ပြင်လဲထားပြီးလောက်ပါပြီ
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ရဲ့ လေယာဉ်တင်နီမစ်သင်းဘောအုပ်စု တပ်လာ ထိုင်တော့ သူ့အတွက် စစ်မျက်နှာ ကျပ်သွားပါတယ်နီမစ်ရောက်လာတော့ ရခိုင်မှာ အသံသိပ်မထွက်ရဲတော့ဘူး ဟိုကနားညီးတယ်ကွာဆိုပြီး လှမ်းပစ်မှာကြောက်တော့ နှစ်ဖက်တိုင်ပင်ထားသလားမသိငြိမ်သွားတယ်
ငြိမ်တာမကြိုက်တဲ့ သာကောက မတိုက်ချင်နေ လူပ်နေမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ပို့လိုက်တာဖြစ်မယ် ရခိုင်ဟာတစ်ချိန်လုံး ခါရမ်းနေတယ်ဩဇီဝန်ချုပ်က ဇူလိုင်လကပြောဖူးတယ်
(130628) — CAVITE PROVINCE, June 28, 2013 (Xinhua) — U.S. navy soldiers and their Philippine counterparts disembark fromaspeed boat afterasurveillance operation training duringajoint military exercises between the Philippines and the U.S. in Cavite Province, the Philippines, June 28, 2013. The Philippines and U.S. Naval forces began joint military exercises codenamed Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) at the South China Sea on June 27 to enhance the capability of both sides through practical exercises and lectures. (Xinhua/Rouelle Umali)
စစ်ပွဲစရင်တရုတ် ဖိလစ်ပိုင် အငြင်းပွားနေတဲ့ကျွန်းကစမယ်တဲ့အဲ့ကျွန်းပေါ်မှာ တရုတ်ရေတပ်စစ်စခန်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ ဖိလစ်ပိုင်လေတပ်က ဂျက်ဖိုက်တာတွေ အဲ့ကျွန်းပေါ် ဖြတ်ပျံရန်စ လိုက်တယ်တရုတ်ကဘာတုန့်ပြန်တာမှတော့မရှိသေးပါဘူး
စစ်ပွဲစပြီဆို ကျွန်းတွေကရေတပ်စခန်းတွေအရင်ချေမှာ သေချာပါတယ် ကိုကိုကျွန်းနဲ့နီးတဲ့ အက်ဒမန်ကျွန်းမှာ အိန္ဒိယရေတပ်စခန်းရှိသလို နီမစ်ကလဲထိုနေရာမှာတပ်ထိုင်နေတာပါအချုပ်ဆိုရလျှင်ဇတ်ရှိန်ကအမြင့်ဆုံးတက်လာပြီဖြစ်သလို ပွဲစဖို့ကလဲကပ်နေပါပြီ
စစ်ပွဲလဲ စတော့မှာဖြစ်သလိုမြန်မာ့နိုင်ငံရေး ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲပါတော့မယ် လို့ ထင်မိပါတယ်ဗျာ
soure : မုဆိုး လက်
တရုတျကို တဈရဈခငျြး ခညျြနတေဲ့ အမရေိကနျ နဲ့ မဟာမိတျတို့ရဲ့ကိုယျစားပွု ဂပြနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးရဲ့ အာဆီယံ ၅ နိုငျငံခရီး
ဂပြနျဝနျကွီးခြုပျ ရှငျဆိုအာဘေးက စဈစရိတျ ကွီးမွငျ့မူအတှကျ တရုတျမှာတာဝနျရှိတယျ လို့ဆိုလိုကျတာတရုတျဘာအသံမှထှကျမလာပါဘူး
သူဆိုလိုတာ တောငျတရုတျပငျလယျနဲ့ ဘင်ျဂလား က အမရေိကနျ နဲ့မဟာမိတျတပျတှတေရုတျကို ပိတျဆို့ထားမူအတှကျ တရုတျခံရမယျလို့ ရနျစလိုကျတာပါဂပြနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးလဲ အာဆီယံ ၅ နိုငျငံခရီးထှကျနပေါတယျ
အဲ့ ငါးနိုငျငံလုံးဟာ တရုတျနဲ့ထိစပျနတေဲ့နိုငျငံတှေ ဖွဈနပေါတယျ မွနျမာကိုတော့ကိုဗဈတိုကျဖကျြရေးအတှကျ ယနျးဘီလီယံ ၃၀ထောကျပံမယျလို့ ဆိုထားပါတယျဂပြနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးခရီးစဉျမှာ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံနဲ့လဲတှမှေ့ာဖွဈသလို ကာခြုပျနဲ့လဲတှမှေ့ာပါ
အခုဂပြနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဟာ အမရေိကနျနဲ့မဟာမိတျတို့ရဲ့ကိုယျ စားပွုလာတာဖွဈနိုငျပါတယျလူလညျကွီး အီရနျက ရူးခငျြယောငျဆောငျနသေလို
မွောကျပုကလဲ အသံတောငျမထှကျတော့ပါဘူးထရနျ့ကလဲ တရုတျကိုတဈရဈခငျြး ခညျြလာလိုကျတာအခုဆို တရုတျမှာ ကုမ်မဏီပေါငျး ၂.၃၁သနျ
း ပိတျသိမျးလိုကျရသလို လူဦးရသေနျးနဲ့ခြီ အလုပျလကျမဲ့တှဖွေဈသှားပါတယျအမရေိကနျနဲ့အနောကျအုပျစုတှေ ပိတျဆို့မူကွောငျ့တရုတျကုမ်မဏီပိုငျရှငျသူဌေးတှေ ပွိုကကြုနျတာကွောငျ့ပါတီအတှငျးမှာလဲ ကငျြဖငျ့ကို ထောကျခံမူတှကေဆြငျးလာပါတယျ
စဈမတိုကျဖွဈလဲ တရုတျအနနေဲ့ ကမ်ဘာကို ကိုဗဈလြျောကွေး ဒျေါလာထရီယံနဲ့ခြီပေးရပါမယျတိုကျလို့ရူံးလဲ နိုငျငံလဲကွလြေျောကွေးလဲပေးရပါမယျတရုတျဘယျလိုမှရှောငျလှဲမရပါဘူးသူမြှျောလငျ့ထားတာ ရခိုငျက ဘင်ျဂလားထှကျပေါကျအကွီးအကယျြခံစဈပွငျခငျြတာ ပွငျလဲထားပွီးလောကျပါပွီ
ဒါပမေယျ့ အမရေိကနျရဲ့ လယောဉျတငျနီမဈသငျးဘောအုပျစု တပျလာ ထိုငျတော့ သူ့အတှကျ စဈမကျြနှာ ကပျြသှားပါတယျနီမဈရောကျလာတော့ ရခိုငျမှာ အသံသိပျမထှကျရဲတော့ဘူး ဟိုကနားညီးတယျကှာဆိုပွီး လှမျးပဈမှာကွောကျတော့ နှဈဖကျတိုငျပငျထားသလားမသိငွိမျသှားတယျ
ငွိမျတာမကွိုကျတဲ့ သာကောက မတိုကျခငျြနေ လူပျနမှေဖွဈမယျဆိုပွီး ဗိုငျးရပျဈပို့လိုကျတာဖွဈမယျ ရခိုငျဟာတဈခြိနျလုံး ခါရမျးနတေယျဩဇီဝနျခြုပျက ဇူလိုငျလကပွောဖူးတယျ
စဈပှဲစရငျတရုတျ ဖိလဈပိုငျ အငွငျးပှားနတေဲ့ကြှနျးကစမယျတဲ့အဲ့ကြှနျးပျေါမှာ တရုတျရတေပျစဈစခနျးရှိပါတယျဒီနေ့ ဖိလဈပိုငျလတေပျက ဂကျြဖိုကျတာတှေ အဲ့ကြှနျးပျေါ ဖွတျပြံရနျစ လိုကျတယျတရုတျကဘာတုနျ့ပွနျတာမှတော့မရှိသေးပါဘူး
စဈပှဲစပွီဆို ကြှနျးတှကေရတေပျစခနျးတှအေရငျခမြှော သခြောပါတယျ ကိုကိုကြှနျးနဲ့နီးတဲ့ အကျဒမနျကြှနျးမှာ အိန်ဒိယရတေပျစခနျးရှိသလို နီမဈကလဲထိုနရောမှာတပျထိုငျနတောပါအခြုပျဆိုရလြှငျဇတျရှိနျကအမွငျ့ဆုံးတကျလာပွီဖွဈသလို ပှဲစဖို့ကလဲကပျနပေါပွီ
စဈပှဲလဲ စတော့မှာဖွဈသလိုမွနျမာ့နိုငျငံရေး ကွီးကွီးမားမား ပွောငျးလဲပါတော့မယျ လို့ ထငျမိပါတယျဗြာ
soure : မုဆိုး လကျ
၂၀၇၀ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်းသုံးထောင်ကျော် မှာ အလွန်ပြင်းထန်သော အပူချိန်ထဲတွင် နေထိုင်ကြ ရတော့မည်ဟု ပညာရှင်များ သတိပေး